Chengetedza nemari yakanyanya kufungidzira pamusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Chengetedza nemari yakanyanya kufungidzira pamusika wemasheya
Iko kushomeka kwemidziyo yekuchengetedzeka, inozivikanwawo sekuti chicharros, chinhu chinodzivirira vatengesi kuti vakwanise kupinda kana kubuda munzvimbo dzavo nekumwe kusununguka. Iko kusagadzikana kwavo kwakanyanya kunovaita tsika dzine njodzi dzekudyara, sezvo zvichikwanisa kuwana mari yakawanda, asi zvakare kurasikirwa nayo nekukurumidza. Ndicho chinangwa cheavo vazhinji vanofungidzira vadiki nepakati varimi vanoda kuwana mari yakawanda munzvimbo pfupi yenguva pane kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Pasi peizvi sangano kuda kuziva kwavari pizi, sezvo panguva imwechete yakashoma tekinoroji, vanosanganisira akateedzana ehunhu hunhu hweSpanish equities. Ivo vakatanhamara nekuti iwo madiki capitalisation uye ane huwandu hwezvibvumirano izvo zvinotomiririra kuva zvinomiririra zvekutengesa nekutenga mashandiro pamusika wemasheya. Asi kana paine chinhu chimwe chete ivo vanozivikanwa kwazvo nevashambadziri, imhaka yekuchinja kwakasimba uko mutengo wezvikamu zvavo unoratidza.
Zvese zviri mune izvo zvinoreva kuwedzera kana kuderera mumutengo wazvo wezuva nezuva, pamwe nekusiyana pakati pemitengo yayo yepamusoro neepasi iyo inogona kusvika zvakakwana 10% mune imwechete yekutengesa chikamu. Kusvika padanho rekuve imwe yemari yemari ingangodaro inosimudzira fungidziro yehunhu hwekutengesa. Zvakanaka, mumakambani mune zvakawanda kuchengetedzeka kweaya akasarudzika maitiro uye izvo zvinofadza vashandisi vanokombamira kune urwu rudzi rwekushanda, uko kune rimwe divi rinotakura njodzi huru mukufamba mumisika yemakambani.
1 Kufungidzira kwekufungidzira: chii izvo?
2 Mashandiro nemaitiro aya?
3 Inozivikanwa nekukwira kusagadzikana
4 Tarisa aya maitiro nenzira kwayo
5 Mipiro yemaitiro aya
6 Ngozi yemabasa aya
Kufungidzira kwekufungidzira: chii izvo?
Nemamiriro aya, musika wekuSpain wemusika wagara uchizivikanwa nekuburitsa nhevedzano yemaitiro anochengetedza izvi zvinogara zvichingoita kuti varimi vawane mari yakawanda. Kunyangwe, nekuda kwekukosha kwavo kwakasarudzika, ivo vane hanyawo zvakanyanya nekuburitsa kwakanyanya kukosha mukukosha kwavo. Pasina kuve chikamu cheyese inosarudzika index, ivo vanomiririrwa vari vaviri muKuenderera Musika uye mu Imwe nzira Stock Market (MAB). Kuburikidza nemakambani anozivikanwa akanyorwa senge Sniace, Deoleo, Eurona kana Codere, pakati peyakareba runyorwa rwezvikumbiro zvekudyara.
Muzviitiko zvese, aya maitiro ane njodzi zvakanyanya nekuda kwekufungidzira kwakanyanya uko kwavanomiririra mashandiro avo. Ivo anonyanya kukodzera mashandiro intraday kana kuitiswa mu imwechete yekutengesa chikamu. Chaizvoizvo nekuti vanobvumidza iyo kusiyana pakati pekupinda uye yekubuda mutengo kuve wakafara kupfuura zvakajairwa. Asi nenjodzi isingarambiki yekusungirirwa pazvinzvimbo zvavo Ndokunge, nemutengo wakataurwa kure kwazvo nekutenga nekuda kwekushomeka kwayo kukuru.
Neichi chikonzero chaicho, zvakafanira kuve nehungwaru kuti ushande pamwe nekuchengetedzeka uku nekuti zvinongobatsira chete kana bheji yemusika wemari ichizadza panguva yakakodzera. Chinhu icho varimi vane kudzidza kushoma nekirasi iyi yemitengo hazviwanzo kukura zvakanaka. Kwete pasina, iyo kungwara kunofanirwa kuve dhinomineta mune zvese zviito nevatengesi vepakati nepadiki. Iko isiri mari yese iriko yakaiswa mari, kana zvisiri pachinzvimbo chikamu chidiki chemipiro yezveupfumi yekuisa panjodzi nenzira isingakoshi uye ine njodzi.
Aya ndiwo mazita ehunhu ayo akajairwa kukudziridza zviwanikwa zvine simba zvinobva zvawanda kubvira pakutanga kwekufamba kwekusimudzira. Kunyangwe nekuda kwezvikonzero zvakafanana, ivo vanowanzo mhanya inverse trajectories. Imwe yemienzaniso yakajeka inomiririrwa Zvakaoma Felguera uye izvo zvinoonesa kuomarara kweiyi tsika. Inoratidza kuongororwa kweanosvika gumi% mukati megore ra10, pamusoro pematanho akaratidzirwa neIbex 2018, iri kusiya 35%. Izvo hazvigone kukanganikwa kuti mutsauko uripakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi muzvikamu zvese zvekutengesa zvakakwirira kwazvo uye pamusoro pemamwe maitirwo anoumba huwandu hweSpanish.
Inozivikanwa nekukwira kusagadzikana
Pane kupesana, uye vachiratidza kusarudzika kukuru mukuenderana kwemitengo yavo, yakadzikira 68% kwemakore maviri apfuura. Kucherekedza kuoma kushanda mukati nepakati nepakati. Hazvishamisi kuti ndeimwe yemasangano akajairika ane mapea: anoshandiswa kuita mamwe mashandiro uye akaganhurwa maererano nekusingaperi. Hazvifanirwe kushandiswa chero nguva, kure nazvo. Kana zvisiri, pane kudaro, kwenguva dzakakosha chaizvo pazvinonyanya kukosha kusarudza rudzi urwu rwekudyara zvakanyanya uye rakasiyana nemamwe ese emusika wemusika.
Semhedzisiro yezviratidzo izvi, pane mari yakawanda inogona kuwanikwa nekuvhura zvinzvimbo, asi zvakare yakawanda maeuro akarasika munzira. Nekusiyana kwechikamu chimwe chete chekutengeserana chinosvika pamakumi maviri neshanu muzana, neimwe nzira kana imwe, semhedzisiro yerunyerekupe kana chiitiko chekambani chakabatana nemari yayo kana kufarira kwemamwe makambani akanyorwa. Nemashoma mashoma masheya ari kutengeswa, maitiro anowanzoita mhirizhonga. Uine Shanduko yemaitiro inova imwe yeanonyanya kukosha madhinominesheni eiyi hunhu hwekufungidzira kana kunodaidzwa kuti chicharros.
Tarisa aya maitiro nenzira kwayo
Chero zvazvingaitika, kuti uone mapea mumusika wemasheya, hapana zvirinani pane kuenda kune yavo yekutsva vhoriyamu uye decipher avo vari vamiririri vavo. Ivo vanozivikanwa nekuti shanduko yemazita mumusika haigone kusvika zviuru zvishoma zvema euro. Kusiyana ne machipisi ebhuruu yemakambani emunyika anotengesa yakawanda mari muchikamu chekutengesa, mu dzakakomberedza gumi kana makumi maviri emamiriyoni euros. Kunyangwe vari munguva dzinonyanya kushanda dzekutora mazwi, mapea aya akapetana nekuhaya kwavo. Ichi chiratidzo chidiki chekuona aya akakosha emhando dzenyika.
Chimwe chinhu chinotsanangura makambani aya ndechekuti hapana mamiriro ezvinhu avanogovanisa zvikamu pakati pevachagovana navo. Nekuti yavo mitsara yebhizinesi haina kuunza mabhenefiti kune bhizinesi account. Saka zvinopfuura chokwadi mubhizinesi ravo, izvo zvinovakirwa pane zvinotarisirwa uye nekuda kweichi chikonzero ivo vari panjodzi yekupindamo kuchinja kwemahara yakakwira kwazvo mumitengo yavo. Hazvishamisi kuti iyi kirasi yemitengo yemitengo haina kujeka uye iri pamiromo yechikamu chakakura chevashambadziri vanopihwa kirasi iyi yekushanda zvakanyanya uye panguva imwechete ine njodzi yakawanda mukufamba kwakatorwa.
Mipiro yemaitiro aya
Ichokwadi kuti hunhu hunozivikanwa sechicharros hunogona zvakare kuburitsa isinganzwisisike imwe nguva yekudyara. Unoziva here kuti ndeapi mamwe akakodzera? Zvakanaka, kuitira kuti ugone kushanda zvinobudirira muboka iri rekudyara, hauzove nesarudzo kunze kwekuziva kuti ndeipi mimwe mipiro yakanaka kwazvo iyo yavanogona kukupa uye kuti ivo vanayo, kunyangwe vazhinji vevashambadzi vadiki nepakati. havazive munguva dzino. Semuenzaniso, iwo atiri kuzokuratidza pazasi:
Su upside zvinogona yakakura uye mune dzimwe nguva haina kana miganhu. Zvimwe zvacho zviri kushomeka mune zvakajairika tsika dzehunhu equities. Iwe unongofanirwa kugara nenjodzi yepamusoro yekuti iwe unofanirwa kuongorora kuti inokodzera chimiro chako kana kwete seanodyara.
Une hwakawanda hunhu neaya chaiwo maitiro. Ehezve, kupfuura iwe zvaunofungidzira kubva pakutanga uye nenzira iyi iwe une zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza kubva uye kuve uripo muchikamu chikuru chemashamba emusika wemasheya. Chero zvazvingaitika, hauzorasikirwa nezvikumbiro kana iwe uchida kuzadzikisa kudiwa uku pamusika weSpanish wemusika.
Imwe yemabhenefiti ayo akakosha ndeyekuti imwe yeiyi tsika ivo vane mvura kwazvo zvinopesana nekutenda kwese. Iko kwausingazove nedambudziko rekupinda nekubuda munzvimbo dzavo chero nguva uye mamiriro. Kunyangwe ichinyatso chenjera nayo, nekuti haina kukanganisa hunhu hwese hwekufungidzira, asi chete mashoma akasarudzwa.
Kana zvaunoda zviri manzwiro akasimba zvirokwazvo iwe uri kutarisana neakanakisa emari. Neichi chikonzero, ivo chete avo vanoda kurarama nemanzwiro aya ndivo vanofanirwa kushanda nekirasi iyi yemaitiro yakakosha kune vese varairidzi. Hazvishamisi kuti chikuru kukurudzira kune vamwe vacho ndiyo chaiyo njodzi. Iyo yakanyatso tsanangudzwa chimiro cheimwe yakati kirasi iyo vamwe vadiki nepakati varimi varipo.
Ngozi yemabasa aya
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa zvakare kuongorora uye kuongorora njodzi irimo mune aya marudzi ekushanda pamusika wemasheya. Ivo vari kupfuura zvaunogona kufungidzira, asi isu tiri kungo tarisa zvimwe zvipingaidzo zvezviitiko izvi.
Unogona kurasikirwa nechikamu chakanaka cheguta rako inowanikwa munzvimbo pfupi yenguva.
Iwe unofanirwa kuziva mashandiro nemaitiro aya, zvikasadaro njodzi dzinowedzera zvakanyanya.
Ivo havana hanya kuti iwe ugadzire hombe yemari kupa kune mashandiro, asi pasi pemafambiro e shoma shoma mari.
Uye pakupedzisira, izvo zvinowanzoitika vanotongwa nemitemo yavo uye havateveri zvinoitika zvemisika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chengetedza nemari yakanyanya kufungidzira pamusika wemasheya
Varimi Vavaki Vanosiya Soko Rekutengesa?
Ndeupi mutero wekunyoresa?